ရခိုင်ကမ်းခြေဘက်ကိုလေမုန်တိုင်းလာနေပြီ – Cyclone | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ရခိုင်ကမ်းခြေဘက်ကိုလေမုန်တိုင်းလာနေပြီ – Cyclone
ရခိုင်ကမ်းခြေဘက်ကိုလေမုန်တိုင်းလာနေပြီ – Cyclone
Posted by Kyaemon on May 11, 2013 in Myanma News |9comments
ရခိုင်ကမ်းခြေဘက်ကိုလေမုန်တိုင်း “o1B” လာနေပြီ
အကြောင်းစုံနဲ့ ပုံတွေကိုပါကြည့်ဘို့ အောက်ပါ linkလင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
လေမုန်တိုင်းနှစ်ခုအနက် ဒုတိယ ဟာ “01B” က အသက်အန်တရာယ်ပေးနိုင်ပြီး၊
The storm is expected to approach Bangladesh Wednesday, however anyone in the area from northeast India to Myanmar can be impacted by this storm.
အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းဟာ တဖြည်းဖြည်း
ပိုမို အားကောင်းလာနေပြီးတော့ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် ကို ဖြတ်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့ခြမ်းဒေသတွေကို အင်အားပြင်းမုန်တိုင်းတခုအဖြစ် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ၀င်ရောက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်း အမေရိကန် လေတပ်နဲ့ရေတပ်ပူးတွဲ မုန်တိုင်းစောင့်ကြည့် သတိပေးဌာန (JTWC) က မိုးလေ၀သပညာရှင်တွေက သတိပေးထားတာပါ။ အဲဒီဒေသတွေကို မေလ ၁၄ ရက်နဲ့ ၁၅ ရက်နေ့တွေမှာ တစ်နာရီကို မိုင် ၁၀၀ ကျော်နှုန်းနဲ့၊ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အရတော့ အဆင့် ၂ အနေအထားနဲ့ ၀င်ရောက် တိုက်ခတ်လာနိုင်တယ်လို့ သတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း One လို့ နံမည်ပေးထားတဲ့ ဒီမုန်တိုင်းဟာ မေလ ၁၄ ရက်မနက်၂ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ခြမ်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတွေကို ဖြတ်ပြီး၊ ကုန်းတွင်းပိုင်းအထိ ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်နိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ JTWC ရဲ့ မိုးလေ၀သ စောင့်ကြည့် ခန့်မှန်းချက်တွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
( http://www.thithtoolwin.com/2013/05/blog-post_8483.html#.UY2wjcyDzb8.facebook )
မာလာ. နာဂစ်.. ဂီရိ စတာတွေက..မေလဆန်းလောက်မှာပဲ…
ဦးထွန်းလွင် ရဲ့ (Warning)
(15-5-13) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအကြား မောင်တောနဲ့ စစ်တကောင်းမြို့နယ်များကြားမှဖြတ်ကြော်ကာကုန်းတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ ၀င်ရောက်စဉ် လေတိုက်နှုန်းမှာ 65 – 90 knots (75-105mph) နှုန်းဖြင့်တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ မုန်တိုင်းဒီရေအမြင့် ၃ ပေမှ ၅ ပေ ခန့် ရှိနိုင်ပါသည် ။
ကြေးမုံဂျီးနဲ့ ညီအမတော်တဲ့ လေပြင်းမုန်တိုင်း လာနေပြီ.. ပြေးဂျဟေ့ ပြေးဂျ ပြေးဂျ…
ပြောမည့်သာပြောရတာ လေပြင်းမိလို သစ်ပင်တွေလဲပါတယ်ဆိုပီး တရုတ်ပြည်ဖက် သစ်တွေ ခိုးထုတ်ရင် ဒွတ်ခ… တရုတ်သဗုံ ကြေးမုံဂျီးရေ ကြည့်လုပ် ကြည့်လုပ်…
Created on Wednesday, 01 May 2013 12:02
တရုတ်နိုင်ငံသား သစ်ခိုးထုတ်သူများနှင့် အဂတိတရား လိုက်စားသူများကြောင့် မှောင်ခိုသစ် ခိုးထုတ်မှု အရှိန်မြင့်တက်လာကြောင်း တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်မှ ပေးပို့သော သတင်းများအရ သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ရွှေလီဘက်မှ တွေ့ရတဲ့ သစ်ပုံတွေက မြင်မကောင်း ကြည့်မကောင်းပဲ။ ထားစရာ နေရာတောင် မရှိသလောက်ပါ။ မြန်မာပြည်မှာကော သစ်တောတွေ ကျန်သေးရဲ့လားလို့ မေးလို့ရတယ်။ တစ်နေ့တစ်နေ့ အစီးရေ ၂၇၀ နဲ့ ၃၀၀ ကြားမှာ ရှိပါတယ်။ ၁၂ ဘီးကား၊ ၂၂ ဘီးကားတွေနဲ့ နေ့စဉ်တင်နေတာ။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလည်း တစ်ခုခု ပြောသင့်နေပြီလို့ ထင်တယ်။ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အသား ဖဲ့ယူသလို ခံစားရလို့ ပြောပြတာပါ” ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
အပင်ကြီးတွေ ၂၂ ဘီးကားနဲ့ ခြောက်လုံးလောက်ပဲ ရတယ်ဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အမြစ်ပါမချန်ဘူး၊ ပင်စည်ကို သစ်လုပ်တယ်။ အကိုင်းအခက်ကို မီးသွေးဖုတ်တယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားကို export ပြန် လုပ်တယ်။ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေတယ် . .
အပြည့်အစုံ ဖတ်ချင်လျင် …..
မြန်မာပြည် မပါတော့ဘူး ။ ပြန်ကွေ့လာရင်တော့ သိဘူး ။
N Indian Ocean: Storm Alert issued at 11 May, 2013 12:00 GMT
Tropical Storm MAHASEN (01B) currently located near 8.8 N 88.8 E is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Baleshwar (21.5 N, 87.0 E)
To change your TSR Email Alert registration details please use the online form at http://www.tropicalstormrisk.com/chg_prefs.html
To unsubscribe from the TSR Email Alert please use the online form at http://www.tropicalstormrisk.com/unsubscribe.html.
This alert is provided by Tropical Storm Risk (TSR) which is sponsored by UCL, Aon Benfield, Crawford & Company and Aon Benfield UCL Hazard Research Centre.
ဘယ်သူ့ ကို အပြစ်တင်ရမလဲ…
N Indian Ocean: Storm Alert issued at 11 May, 2013 18:00 GMT
Tropical Storm MAHASEN (01B) currently located near 9.3 N 88.1 E is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Kolkata (22.5 N, 88.3 E)
00:00 GMT အရ ထုတ်ပြန်တာတော့ မြန်မာပြည် မပါပြန်ပါဘူး ။ အဖျားခတ်တာတော့ ခံရမယ် ထင်ပါသည် ။
Cyclone storm ‘Mahasen’ weakens, likely to move towards Bangladesh-Myanmar
Sunday, May 12, 2013, 14:38 IST | Place: Bhubaneswar | Agency: PTI
ပြီးခဲ့တက် ၁၀ နာရီ က သတင်း
01B ခေါ် မဟာစိန် လေမုန်တိုင်းအားနဲသွားပြီ၊
The cyclonic storm ‘Mahasen’ created over southeast Bay of Bengal has weakened and moved slightly towards the northwest, the local Met office said on Sunday.
“Latest satellite imagery shows disorganisation of cloud mass and weakening of the system,” said S K Dastidar, the director in-charge of the local IMD was quoted as saying in its bulletin.
The system lay centred at 8:30 am near about 1,140 km south of Paradip. It would move initially northwestwards during the next 36 hours and recurve thereafter northeastwards towards the Bangladesh-Myanmar coast, according to the bulletin.
ပြီးခဲ့တက် ၄ နာရီ က သတင်း
01B ခေါ် မဟာစိန် လေမုန်တိုင်းကပြန်လဲအားဖြည့်လာ
‘Mahasen’ rebuilds in Bay even as Arabian Sea warms up
…Cyclone Warning Centre of India Met Department expected it to initially move northwestwards and re-curve towards Bangladesh-Myanmar coast….
A prevailing western disturbance, which would eventually steer cyclone Mahasen towards Bangladesh/Myanmar, has called in at North Pakistan and adjoining Jammu and Kashmir. ….
ပြီးခဲ့တက် ၇ နာရီ က သတင်း
YANGON, May 12 (Xinhua) — Myanmar’s Meteorology and Hydrology Department has warned against possible severe storm over the country’s western Rakhine coastal areas next week, official media reported Sunday.
Depression over the southeast of Bay of Bengal has intensified into cyclonic storm “Mahasen” which centered at 800 kilometers southwest of Kawthoung, it said, adding that coded as yellow stage, the cyclonic storm is likely to turn northeastwards beginning next Monday afternoon and cross Myanmar’s Rakhine coast (northern part) and Bangladesh coast on next Thursday morning.
The department has suggested inshore and offshore fishing trawlers and vessels off and along Myanmar coastal areas to avoid the storm, warning people residing along the storm route to put themselves on full alert over the first four days of next week.
The department also warned of heavy rain in central region, especially Magway, Sagaing and Mandalay with possible danger of landslide and raging torrent when the cyclone passes through such Rakhine coastal areas as Maungtaw and Sittway atawind speed of as high as 190 kilometers per hour.